Adidin'ny ray aman-dreny ny miresaka fananahana...
Naseho ny : 20 novambra 2020
Zava-dehibe amin'ny fivoaran'ny zaza sy ny ankizy ary adidin'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ny miresaka mikasika ny mahalahy sy mahavavy ary ny fananahana amin'izy ireo ho fahalalana ho azy sy ho fiarovana amin'ny fanararaotana ara-nofo samihafa. Amin'ny alalan'ny fanontaniana hapetrany no hanomezana azy ireo ny fahalalana sahaza araka ny taonany amim-pifandraisana tsara sy mahatoky. Tsy misaraka amin'izany adidy izany ny fanahara-maso sy fandraisana an-tanana, ara-pahasalamana azy ireo raha ilaina...
Ny fiarovana ny ankizy sy ny olona marefo
Naseho ny : 13 novambra 2020
Fanentanana ny olon-drehetra amin'ny fandraisana andraikitra hiaro ny zaza tsy ampy taona sy ny olona marefo manoloana ny loza mety hahazo azy ireo indrindra "ny fanolanana na herisetra ara-nofo". Manomboka amin'ny ray aman-dreny ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fifampiresahana sy fampahafantarana azy ireo ny atao hoe herisetra, mba hahafahan'izy ireo miaro tena ary indrindra mizara amin'ny ray aman-dreny...
Ny fifadiana ny fampitondrana kitra...
Naseho ny : 6 novambra 2020
Zary fomba amam-panaoantsika amin'izao fotoana izao, na lehibe na tanora na ankizy ny tsy mahay miaina sy tsy mahay mitia. Mamono ankoloka na mivantana ny fampitondrana kitra ny mpiara-belona. Ny fametahana anaram-bositra dia fampitondrana kitra
Pejy 3 amin'ny 3